Dekada Muqdisho oo lagu soo bandhigay Markab casri ah oo siday Badeecadaha daruuriga ah – idalenews.com
Dekada Muqdisho oo lagu soo bandhigay Markab casri ah oo siday Badeecadaha daruuriga ah
Dakada magaalda Muqdisho ayaa markii ugu horaysay lagu soo bandhigay mudo 20 sano kadib Markab casri ah oo lagu keenay qaar ka mid ah badeecadaha qutul daruuriga ah, iyadoo munaasabada furitaanka ay ka qaybgaleen mas’uuliyiinta dowlada.
Munaasabadan oo ka dhacday Markabka dushiisa ayaa waxaa ka qeybgalay ku simaha wasiirka warfaafinta, Isgaarsiinta, Gaadiidka Cirka iyo Dhulka ahna wasiir ku xigeenka wasaarada mudane Ibraahim Isaaq Yaroow, wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo Dekedaha, Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur, Ganacsato iyo marti sharaf kale oo isugu jiray siyaasiyiin iyo aqoonyahano.
Maareeyaha Dekeda Cabdullaahi Cali Nuur iyo wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo Dekedaha Xaaji Cali Sheekh Maxamed Nuur ayaa uga mahadceliyay dadaalada ay ganacsatada Soomaaliyeed ku bixinayaan horumarinta ganacsiga dalka.
Madaxa Shirkada keentay Markabka Yacquub Abuukar Cali iyo C/rashiid Cali Ceynaanshe oo ku hadlayay magaca rugta ganacsiga ayaa ka waramay howlaha baaxada leh oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo sheegay in shirkada Sematej ay ku dhiiratay in ay horumariso qaabka lagu keeno xamuulka.
Maareeye ku xigeenka Dekeda Axmed Cali Kaahiye ayaa ka hadlay faa’iidada uu markabkani u leeyahay faa’iidada uu Markabkani u leeyahay howlaha la xiriira dhoofinta iyo dejinta, isagoo sheegay in nidamkan uu yahay mid badeecada lagu xafidayo Konteenar.
Markabkan iyo maraakiibta kale ee casriga ah ayaa la filayaa in ay wax weyn ka taraan dhibaatooyinkii ay badeecadaha soo gaari jirtay inta ay ku gudajiraan Badda laakiin Markabkan waa mid badeecada lagu xafidayo Konteenarro.
Wasiirka arrimaha gudaha oo ku baaqay in la joojiyo dagaalada ka socda Kismaayo
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Somalia oo laga soo musaafuriyay Somaliland